Culimada iyo qeybaha bulshada Dhuusamareeb oo cambaareeyay Wargeyska Chirlie Hebdo – Radio Muqdisho
Culimada iyo qeybaha bulshada Dhuusamareeb oo cambaareeyay Wargeyska Chirlie Hebdo
Kulan looga soo horjeeday wargeys ka soo baxa dalka Faransiiska oo aflagaaddo u geystay Nabigeenna Muxamad “N.N.K.H” oo ay soo qaban qaabiyeen Culimaa’uddiin ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb.
Dadweynaha ku nool magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa cambaareeyay af-lagaaddadii ka dhanka ahayd nabi Muxamad “N.N.K.H” ee uu dhawaan daabacay wargayska Chirlie Hebdo, waxaana ay falkaasi ku tilmaameen in uu yahay mid meel looga dhacay sharafka Muslimiinta.
Culimaa’uddiinkii ka hadlay kulan lagu qabtay Dhuusamareeb oo ka dhan ah wargeyska Chirlie Hebdo ayaa sheegay in ay aad uga xunyihiin falka uu ku kacay Wargeyska.
Culimada ayaa dhaliil xooggan u jeediyay dowladda Faransiiska oo ay ku eedeeyen inaysan tallaabo ka qaadin af-lagaaddada uu wargeysku u geystay diinta Islaamka iyo Nabi Muxamad “N.N.K.H”.
Waxay sheegeen in uu Alle xafidayo diinta Islaamka iyo ambiyadiisaba, haddana aan la aqbali karin in la af-lagaaddeeyo.
Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid oo ka tacsiyeeyey geeridii ku timid Xildhibaan Xaabsade